Haweenku ma qaadan karaan Primobolan (Methenolone Acetate)? | Budada AASraw
/blog/Pregabalin/Haweenku ma qaadan karaan Primobolan (Methenolone Acetate)?
Posted on 11 / 29 / 2017 by 阿斯劳 ku qoray Pregabalin.
waa maxay Primobolan (Methenolone Acetate)?
Primobolan waa steroid anabolic afka oo ah mid yar oo la mid ah marka loo eego dad badan steroids afka laga qaato. Ka hor intaanan sii dhaafin, waxaa muhim ah inaan kala saarno farqiga u dhexeeya Primobolan iyo Depository Primoban. Daawada Priminsan waa daawo laysku duro oo hormoon ah oo kuxiran hannaanka wayn ee loo yaqaan 'enanthate ester'. Primobolan waxay ka kooban tahay hoormoonka hormoonka ah ee firfircoon ee Methenolone; Si kastaba ha ahaatee, waxay kuxirantahay aabaha yar yar / gaaban ee loo yaqaan 'acetate ester' oo loogu talagalay maamulka afka.
Primobolan waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah lafdhabarta anabolic anabolic suuqyada, waxaana ku jira qiimeyn badbaado oo heer sare ah si dib loogu soo celiyo dalabkan. Xaqiiqdii, steroidkan waxaa loo isticmaalay si guul leh si loogu daaweeyo carruurta aan dhererka lahayn iyo ilmo dhicis ah oo aan dhaawac lahayn. Waxaa sidoo kale loo qoraa lafo-jabka iyo sarcopenia. Si kastaba ha ahaatee, ujeedada ugu muhiimsan ee Primobolan waa daaweynta cudurrada muruqyada lafdhabar u ah iyo mudo dheer oo la taabto hormoonada corticoid. Waxa kale oo ay xaqiijisay in ay si aad ah waxtar ugu yeelaneyso daaweynta nafaqo-xumada.
Doorashada door muhiim ah ee qorshaha daweynta daaweynta, Primobolan waa mid aad u steroid caan ah oo caan ah oo ka mid ah waxqabadka cayaaraha. Si kastaba ha noqotee, nooca loo yaqaan 'Depot' ayaa ah mid aad u caansan oo ah qaabka afka laga qaato oo aad u jilicsan. Dhismayaasha jirka, methenolone Acetate-ka oo la isku mudo ayaa ah qaabka la doorbidayo laakiin tayada daawada ee Acetate-ka ah ayaa aad u adag in la helo. Dheeraad ah, hoormoonka methenolone lafteeda, xitaa xaddidnaanta qaabka afka waa mid ka mid ah steroids anaboleed oo aad u badan. Sidoo kale waa qaali ahaan suuqyada dhulka hoostiisa. Astaantani waa mid si fiican loogu yaqaan inuu noqdo midka ugu cadcad Arnold Schwarzenegger. Xaqiiqad intee le'eg ayuu ku jiraa oo kaliya, laakiin sheekadu waxay ku filan tahay dad badan si ay u sameeyaan fikrado aan fiicnayn oo ku saabsan dareenkiisa hoormoonka iyo sida uu u isticmaalo. Taas waan ognahay. Waxa kale oo ay ahayd ku filan in la sii wado dalabka this steroid this si aad u sarreeya, iyo sidoo kale suntan suuqyada leh counterfeits.
Qoraal muhiim ah oo ku saabsan baahida; dalbashada steroidkani waa mid aad u sareysa sababtoo ah dabeecadeeda caanka ah ee haweeneyda ah. Tani waa mid ka mid ah haweenka uur-ku-taagta ee anabolis-yar ee dumarka u adeegsan kara heer aad u sarreeya. Steroids sida Primobolan iyo Anavar waxay sameeyaan qiimeyn aad u tiro yar oo udubdhexaadin ah iyaga oo si fiican u isticmaalaya isticmaalka dheddigga.
Halkee u iibso budada dhabta ah (Methenolone Acetate) budada cayriinka ah ee internetka?
Waxaad ka heli kartaa ilo badan oo ah budada Primobolan (Methenolone Acetate) khadka tooska ah, laakiin way adagtahay inaad ka iibsato Genuine Primobolan (Methenolone Acetate) cayriin khadka tooska ah. Waxaa jira ilo badan oo suuqa ku iibinaya alaabooyin been abuur ah. markaa markaad ka iibsatid shey cayriin Primobolan (Methenolone Acetate) khadka tooska ah, waxaad u baahan tahay inaad doorato ilo sugan.
Sidee Primobolan (Methenolone Acetate) shaqeeyaa?
Methenolone waa nooc ka mid ah dihydrototestosterone (DHT) ama si gaar ah qaabka qaab beddelaad ah ee DHT. Dammaanad labajibbaaran ee kaarboonka hal iyo laba ayaa lagu daraa hormoonka DHT, taas oo si weyn u kordhisa dabeecadda anaboleed ee hoormoonka. Waxay sidoo kale qaadataa koox 1-methyl oo ka ilaalisa burburka cagaarshow. Ku darida dheriga loo yaqaan 'Acetate ester' ayaa sii difaacaya sheybaarka jirka.
Sida steroid afka ah, Primobolan waa mid ka mid ah steroids oo keliya oo aan ahayn C17-alpha alkylated (C17-aa) steroid. Ka hor-istaagidda qaab-dhismeedka C17-aa, tani waxay sidoo kale loola jeedaa Primobolan afka ah maaha sunta. Si kastaba ha noqotee, inkastoo tani ay tahay guno, inta badan waxay ka helaysaa Primobolan afka si ay u noqoto mid fudud ama xitaa isbuuc oo steroid ah marka loo eego kuwa kale oo badan oo ah karti kor u qaadka. Raggu ma dareemayaan heer isku mid ah dhaqdhaqaaqa anabolic marka la barbardhigo steroids badanaa. Qalad ha samayn, Primobolan waxay leedahay booskeeda waxqabadka waxqabadka, laakiin ragga intooda badani waxay helayaan version Depot inay wacaan. Sida haweenka, dabeecaddan khafiifka ah ayaa qeyb ka ah waxa ka dhigaya doorasho fantastik ah.
Hormoonka methenolone wuxuu qabaa sifooyin dhowr ah oo la mid ah qiyaasaha kale ee anabolic anabolic. Hormoonkani wuxuu xoojin doonaa unugyada borotiinka (illaa heer) oo saameyn ku yeelan kara kor u kaca tirada unugyada dhiigga cas. Si kastaba ha noqotee, steroid waxay qaadataa saddex sifood oo muhiim ah taas oo kala sooca wax ka badan wixii kale. Primobolan ayaa si weyn u hagaajin doona xajinta nitrogen. Tani waxay xaqiijinaysaa dawlad-goboleedka awood-u-dhigidda waa laga fogaadaa oo sidoo kale waa ku fiican yahay dhisidda unugyada cagaaran. Si kastaba ha noqotee, sida ku xusan maadadaas steroidska kuma xirnaayo cabbir badan, maskaxda ku hay. Hormoonka ayaa sidoo kale lagu muujiyey inuu leeyahay xiriir adag oo xoog leh oo loogu talagalay soo-qabsashada qufaca. Xoojin xoog leh ee loo yaqaan 'androgen reseptor' ayaa lala xiriiriyay lipolysis toos ah. Inta badan daawooyinka steroids anabolic waxay kor u qaadaan heerka dheef-shiid kiimikaad hooseeya, laakiin Primo sida badanaa la og yahay waxay u muuqataa inay taageerto luminta tooska ah. Marka aynu tixgelinno tan oo ay weheliso xoojinta xoogga leh ee ku jirta xajinta nitrogen, waxaan bilaabi karnaa in aan aragno in tani ay noqon doonto steroid xoog leh oo ah marxaladda jarista.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee muhiimka ah ee Primobolan ayaa saameyn ku yeelanaya habka difaaca jirka. Hormoonka Methenolone ayaa lagu muujiyay inuu si weyn u wanaajiyo habka difaaca jirka. Xaqiiqdii, waxaa si guul leh loo isticmaalay daawaynta dadka qaba AIDS. Qofkaas oo kale, ma aha oo kaliya inuu yeesho difaac difaac laakiin wuxuu ka ilaaliyaa wixii ka yimaadda cudurka murqaha. Kor u qaadista tayada isku midka ah waxay si weyn uga faa'iideysan doontaa cayaaraha kor u qaadaya waxqabadka inta lagu jiro marxaladda goynta.
Cetilistat budada cayriin miisaan lumis Labada hormoon ee hormoonka jinsiga Raw Jinyang Alkali budada